पोखरा आइपुग्यो पिसिआर मेसिन, आजबाटै कोरोना परीक्षण थालिने – Health Post Nepal
पोखरा आइपुग्यो पिसिआर मेसिन, आजबाटै कोरोना परीक्षण थालिने
१७ सिटको प्रवेश परीक्षामा ८७० डाक्टर सामेल
गोरखामा अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको परीक्षण सोमबारदेखि पोखराबाटै हुने भनिएको थियो । तर परीक्षणका लागि आवश्यक पिसिआर मेसिन पोखरा आइनपुग्दा सोमबारबाट सुरु हुन सकेन । मेसिन आज बिहानै पोखरा ल्याइएको छ । मेसिनसहित आवश्यक सबै कीट र विज्ञ टोलि हेलिकप्टरमार्फत बिहान पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्यान्ड गरेको हो ।
मेसिन पोखरा आइपुग्दा पनि कहाँ राख्ने भन्ने यकिन भइसकेको थिएन । मेसिन पोखरा आइसके पछि बसेको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन, अर्थमन्त्री किरण गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारी, प्रतिष्ठानका उपकुलपति बुद्धिबहादुर थापा, स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डा. विनोद विन्दु शर्मा, काठमाडौंबाट आएको विज्ञ टोलिलगायत सहभागि बैठकले परीक्षण मेसिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको ल्याबमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
‘पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र क्षेत्रीय क्षयरोग केन्दमा भएको ठाउँ देखायौं । काठमाडौंबाट आएको विज्ञ टोलिले क्षेत्रीय अस्पतालमा राख्न सुझाव दियो । त्यहीअनुसार अहिले जडान गर्ने कम भइरहेको छ,’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति थापाले भने । जडान गर्ने काम सकिएपछि सम्भवत आजैबाट परीक्षण थालिने उनले जानकारी दिए । सरकारले प्रयोगशाला विज्ञको रुपमा बलराम गौतम, श्रीराम बास्तोला र रोजी पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कास्की–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारी लगायतले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पसिआर मेशिनको तस्बिर राखेर कोरोना परीक्षणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरेका थिए ।
मेशिन प्रयोगमा आएसँगै कोरोना भए/नभएको रिपोर्ट तीन घन्टामा आउने छ । यो मेशिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित भने गरेको छैन । ‘यो मेशिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको छैन तर चीन सरकारबाट पास भएर संसारका विभिन्न देशमा प्रयोग भईसकेको छ,’ गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका प्रोफेसर डा. अमर नागिलाले भनेका छन् ।
सोमबारसम्म ३२ जनाको नमूना संकलन
गण्डकी प्रदेशबाट अहिलेसम्म कोरोना आशंका लागेका ३२ जनाको नमूना संकलन गरिएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि सोमबारसम्म यहाँबाट ३२ जनाको नमूना संकलन गरिएकोमा २१ जनाको मात्र परीक्षण भएको छ । बाँकी ११ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ । नमूना परीक्षण भएका २१ मध्ये २० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । यीबाहेक युरोपबाट फर्किएकी बागलुङकी एक १९ वर्षीया युवतीमा गत १० चैतमा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
उनको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ । ती युवतीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको स्वास्थ्य निर्देश्नालय गण्डकीका आपतकालीन सम्पर्क व्यक्ति नवराज शर्माले जानकारी दिए । कोरोनाको आशंकामा सोमबार एकैदिन ९ जनाको नमूना संकलन गरिएको उनले बताए ।